MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games 5.19.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.19.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Zombies အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများဖုတ်ကောင်လူသတ်သမား၏စွန့်စားမှုဆက်လက်။ တစျလောကလုံးတုန်းပဲသေလွန်သောသူတို့သည်၏နေ့တချို့ဖုတ်ကောင်လူသတ်သမားထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, လာမယ့်သည်နေရာတိုင်း, ဖုတ်ကောင်များကမီးအဆီးအတားဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ကြီးတာဝန်အဘို့စစ်တိုက်ခြင်း, ဒါပေမယ့်သူကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖုတ်ကောင်များ၏မလှယျကူမယ့်ပိုပြီးလူစည်ကားလာပြီနှင့်နေကြတယ် အန္တရာယ်ရှိတဲ့။ ဒီ Zombie ဂိမ်း၌ဤစစ်ဆင်ရေးပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်မလိမ့်မည်လော ဒါဟာသင်ပေါ်တွင်မူတည်သည် - သေနတ်သမားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ!
အများအပြားဖုတ်ကောင်ဂိမ်းမျိုး, ပစ်မှတ်အသေကောင်များနှင့်အရူးကဲ့သို့သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်, ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်, လမ်းလျှောက် run, သင်တိုက်ခိုက်ဖို့, သူတို့ကမိုက်မဲဖုတ်ကောင်မဟုတ်နိုင်, သူတို့အသင်းရှိသည်နှင့်သူတို့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့ငါသိ၏။ Zombies ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကားဒါမှမဟုတ်စက်ရုံထဲမှာ, ရွာ, မြို့, လမ်းကြောင်းအပေါ်လျှောက်လှမ်းနေကြသည်။ ဒီတော့ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းအတွက်အားသာချက်ရရှိရန်, သင်ဦးခေါင်းကနေလူအပေါငျးတို့ကိုသတ်သေလွန်သောသူတို့သည်ရပ်တန့်ဖို့မဟာဗျူဟာလိုအပ်ပါတယ်ဖုတ်ကောင်သင်တို့ဆီသို့လာလျှင်, သင်၏ကျည်ဆံမှတပါးခလုတ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မြန်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်သူတို့ကိုပစ်သတ်ရန်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် သငျသညျအသေခံမယ်!
အဆိုပါ shooters မုဆိုးအမြားပြင်အရူးဖုတ်ကောင်အမဲနေကြသည်ရှိပါတယ်, အ Catcher နှင့်ဖုတ်ကောင်လူသတ်သမားဖြစ်လာဖို့လိုအပ်သည်ရိတ်သိမ်းအရေးယူဂိမ်းဒီလိုမျိုးရပ်နေသည်ကိုပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းဖြစ်ရန်ကြိုးစား, နေရာတိုင်းလာနိုငျသညျ!
ဒါဟာကစားသမားရဲ့အကောင်းဆုံးကွန်မန်ဒိုဖြစ်လာရန်, သေခြင်းရှောင်ရှားရန်ဘာပဲလုပ်ဖို့ရှိသည်သောရှင်သန်မှုဂိမ်းရဲ့ features တွေအများအပြားမျိုးရှိပါတယ်တစ်ဦးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းပါ!
- အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများကို 3D, ဖုတ်ကောင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှလာသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအသက်, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်များမှာတော့သူတို့အားလုံးအရူးဖြစ်ကြပြီးအသက်ရှင်လျက်သမျှကိုသတ်ချင်တယ်
- ဤဖုတ်ကောင်ဂိမ်း 2019 သာမန်ဖုတ်ကောင်သာရှိသည်မဟုတ်, အခြို့ကြီးမားဖုတ်ကောင်သူဌေးနှင့်ပိုပြီးခက်ခဲဖျက်ဆီးဖို့ရှိပါတယ်
- အဲဒီမှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖုတ်ကောင်သငျသညျစနိုက်ပါဂိမ်းတွေဆော့ကစားတဲ့အခါသင်သတ်အံ့သောငှါလာရှိသည်, နှင့်အရူးတဦးတည်းကအမြဲအသစ်အရှင်သန်မှုတည်နေရာနှင့်မြေယာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
စွဲ Zombies အခမဲ့ Gameplay
- ဤဖုတ်ကောင်ဂိမ်းရိုးရှင်းသောဂိမ်းကစားအတူအော့ဖ်လိုင်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ခက်တဲ့အကောင်းဆုံး Terminator ဖြစ်ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပစ်ခတ်မှုကျွမ်းကျင်မှု, headshot ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နည်းဗျူဟာလိုအပ်သည်။
- တာဝန်တွေကိုဖြည့်ဆုကြေးငွေတွေအားလုံးအရူး Zombies ကာကွယ်ရေးသင့်ရဲ့ရှေ့တန်းကိုသတ်နှင့်ဤသေနတ်သမားဂိမ်းထဲမှာအနိုင်ရကောင်းသောလက်နက်များတပ်ဆင်
- သင်ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားချင်တယ်, သေနတ်ပစ်နဲ့အမဲလိုက်ဆိုအမှားလုပ်ပါဘူး, သငျသညျဖုတ်ကောင်တစ်ကိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်
- ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဂိမ်းကိုသင်ကမ္ဘာ့ဖလား opps အခြား shooters နှင့်သင်၏ပစ်ခတ်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှိုင်းယှဉ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခမဲ့ဆုကြေးငွေအရပါစေ
- အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်း: အော့ဖ်လိုင်း Play နှင့်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီဖုတ်ကောင်ဂိမ်းပျော်မွေ့!
လက်တွေ့ 3D graphic & EFFECT
- Soldier ဟာတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်တိုင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, စနိုက်ပါဂိမ်းတွေဒီလိုမျိုးအတွက်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုခံစားရနိုင်ပါတယ်
- သင်သေလွန်သောသူတို့သည်သတ်ဖြတ်သည့်အခါ '' '' owhh '' အော်စေသည်တစ်ခုမှာအရေးယူဂိမ်း
- သေနတ်ပစ်သေနတ်နှင့်လက်ဖြောင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်း upgrade နိုင်ပါသည်။
- ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းထဲမှာ shooters များအတွက်သေနတ်အမျိုးအစားများတစ်ဦးကအများကြီး 2018 အော့ဖ်လိုင်း, တစျဦးစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် features တွေရှိပါတယ်, သငျသညျဒုစရိုကျအသီးအသီးမျိုးကိုအဘို့အညာဘက်ကိုသေနတ်ရှေးခယျြသငျ့သညျ
Inspiration Quest နှင့်အောင်မြင်မှုများ
- Sniper ဂိမ်းတက်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နှင့်ပိုပြီးခေတ်မီပစ္စည်းများကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်အားအပြည့်အ Quest များနှင့်သင့်ပစ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်
- ပစ်မှတ်အောငျနိုငျ, နောက်ဆုံးသောစစ်သည်တော်ရပ်နေရမည်ဖြစ်, အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းအတွက်အသေဖြစ်ကြဘူး
အခုတော့သင်သည်အခြားဖုတ်ကောင်ဂိမ်းအပေါ်ရှိပါတယ်ပါဘူးကြောင့် 200+ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မစ်ရှင်ကျော်မတူညီဖုတ်ကောင်, သေနတ်များနှင့်အတူတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုပစ်ခတ်မှုဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်
ဒါဟာအများအပြား features တွေရှိပါတယ်, ကာလအစဉ်အမြဲနေတဲ့အကောင်းဆုံးဖုတ်ကောင်ဂိမ်းပါလိမ့်မယ်အပတ်တိုင်း update လုပ်, ငါတို့အမြဲသင့်ထံမှကြားချင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းတစ်ဦးအော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းဖန်တီးနေ့တိုင်းပိုကောင်းစေဘို့သင့်တုံ့ပြန်ချက်ကတော့လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်!
ဒါဟာအခမဲ့ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းရဲ့နှင့်အထူးသဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ရဲ့အခမဲ့ Download ပြုလုပ်ပြီးဒဏ္ဍာရီဖြစ်အပေါင်းတို့ကိုအရူးကိုသတ်နှင့်ကမ္ဘာကယ်တင်ပါစေ!
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games အား အခ်က္ျပပါ
benhunter စတိုး 298 60.6k
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.19.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://deadtarget.com/madzombies
လက်မှတ် SHA1: D6:1C:95:54:56:56:5E:5B:69:5A:BC:3C:2A:25:EE:A9:AC:4C:D4:4D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): MPS
နယ်မြေ (L): HCM
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): HCM
MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ